Kobaca xisbiyada xagjirka ee dalka Iswiidhen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bannaan-bax looga soo hor-jeedo faqooqa magaalada Norrköping. Sawirle: Karin Kristensson
Kobaca xisbiyada xagjirka ee dalka Iswiidhen
La daabacay torsdag 9 januari 2014 kl 14.29
Dalka Iswiidan waxaa ka aloosan xaalad ey ku nafaqoobi karaan xisbiyada ey siyaasaddoodu ku dhisan tahay asal raaca fog ee garabka midig ( högerpopolistisk, waxa afkan iswiidhishka lagu yiraahdo), sida xisbiga Sverige-demoqoraadiga oo markii ugu horeeysay suurtagalka u helay iney xubno ku yeeshaan golaha baarlamanka doorashadii ugu dambeeysay ee sannadkii 2010.
Amuurtaa ayay ku caddaatay daraasad la isugu barbar-dhigayey waddammada xubnaha ka ah ururka EU-da, Iswiserland iyo Noorway, kana soo baxday xarunta Daraasaadka Yurub iyo urur sama-faleedka Konrad - Adenauer - Stiftung .
Florian Hartleb, wuxuu ka mid yahay hoowl-wadeennada gacanta ka geeystey daraasaddaa, wuxuuna sharraxaad ka bixiyay sababta uu dalkani ugu dhege-nugul yahay xisbiyada noocan oo kale ah:
- Waa arrin ku cusub dalka Iswiidhen. Siyaasadda xisbiyada midigta fog ee waddammada dhaca Iskandineefiyanka oo salka ku haysa nidaamka hab-nolol-wanaagga qaran-jaceeylka ba'an ku unkan. Xisbiyadaa ayaa adeegsada cabsida bulshada iyo iney lumin doonaan dabaqadda ey ka tir-san yihiin ee dhexe. Iyagoo dhanka kale eedda dusha ka saara ajaaniibta dalka ku dhaqan.
Dalka Iswiidhen ayaaney horey uga jirin xisbiyada siyaasaddoodu salka ku heeyso garabka fog ee midig, sida uu sheegay Florian Hartleb. Hase yeeshee ey ku xidideeysteen waddammada kale ee Yurub ku yaala, halka dalkani uu iminka ku taagan yahay dhabbadii ey waddammadaasi horey u soo qaadeen.
Bisha maajo ee foodda innagu soo haysa waxaa EU-da ka dhici doonta doorashadii xubnaha baarlamanka, mana ahan wax lala yaabo saadaalinta in xisbiga Sverige-dimoqoraadka (SD) uu guul ka soo hoyin doono, sida uu sheegay Florian Hartleb:
- Doorashada xubnaha baarlamanka Midowga Yurub ee EU-da ma laha muhiimad sidaa u wayn oo u dhiganta doorashooyinka waddammada xubnaha ka ah hoggaankooda lagu doorto. Waana mid ey ka qeyb-qaateyaashu ey tiradoodu aad u yar yihiin, iyadoona ey xisbiyada yar yar sida xisbiga Pirateparti loo yaqaanno (Xisbiga burcaddu) kaga suurtagal badan yihiin doorashooyinka baarlamanka waddammada gudahooda.)
Qaaradda Yurub ayey xibiyada garabyada midigta fog ey saameeyn ballaaran ku yeelan karaan, fikirradooduna waa kuwo saameeya dhammaan tallaabooyinka siyaasadeed, sida uu qabo Florian Hartleb. Waanay adag tahay in xisbiyada kale ey saameeyn ku yeeshaan taageeryeyaasha xisbiyada garabka midigta fog, maadaama ey isticmaalaan siyaasadda cabsi-gelinta, sida uu sheegay:
- Xisbiyada kale ayaa u isticmaala xisbiyada garabyada midig ee fog istaraatiijooyin kala duwan oo ey ka mid yihiin la dhisashada isbaheeysiyo, iney soo dhoweeyaan ama dibadda ka joojiyaan siyaasadda. Xaalad cakiran ayey ku sugan yihiin xisbiyada awoodda horey u heyn jirey. Dhacdooyinkan layaabka leh ma ahan kuwo la xiriira ama lagu ogaan karo tira-koob iyo xisaab ee waa dhacdooyin la xiriira cabsida bulshada oo ay adag tahay in la maareeyo.